Thailandy: Hasorenana Noho Ireo Ankizivavy Tsy Nitafy Ny Tapany Ambony Nefa Nandihy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2011 14:12 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, srpski, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, English
Ny resabe tao Thailand tamin'ny herinandro lasa teo (talohan'ny ady sisintany indray nifanaovana tamin'ny tafika Kambaodziana) dia ny tantara be nateraky ny dihy nataon'ireo tovovay nampiseho nono nandritra ny Fetiben'ny Rano Songkran (Taom-baovao Thai).
Ireo saripika sy lahatsarin’ ireo tovovavy telo mandihy miboridana tapany ambony tao Silom, Bangkok dia niparitaka be avy hatrany sy niteraka adihevitra mavesatra be mikasika ny kolotsaina aman-toe-panahy Thai. Tratry ny sazy 500 Baht ($17) ireo tovovavy raha 100.000 Bath ($3,320) kosa izany ho an'ilay olona nampakatra ny lahatsary ary mety hisy hatramin'ny sazy famonjàna hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina noho ny tsy fanarahana ny Lalàn'ny Heloka Bevava Amin'ny Solosaina.
Ny Minisitry ny Kolotsaina dia nanameloka ireo tovovavy telo ho “nanimba ny sarin'” i Thailand ary noho io olana io, dia hamoaka bokikely hanabeazana ny tanora ny Ministeran'ny kolotsaina Thai.
Ny Ministeran'ny Kolotsaina dia miomana hamoaka bokikely hanentanana ny tanora mba hitandrina bebe kokoa ny soatoavin'ny Fetibe Songkran taorian'ny fitondrantena tsy mendrika niaraha-nahita nandritra ny fankalazana ny taombaovao Thai.
Saingy ireo mpiondana aterineto dia nampahatsiahy avy hatrany ny Minisitera fa misy vehivavy miboridana mampiseho nono asongadina ao amin'ny vohikalany ary misitery ny nanjavonan'izany tampoka sy avy hatrany taorian'ilay raharahan'ny dihy niboridana tamin'ny Songkran.
Dikasarin'ny fàfana avy amin'ny vohikalan'ny Ministera, avy amin'i Richard Barrow
Miantso ny Ministera i Catherine mba hamerina ilay sarin'i Nang Songkran (Mpanjakavavin'ny Songkran Thai) nesorina, nanaingo ny vohikalan'ny Ministera.
Fa izao, mba te-hanana fitenenana faran'izay kely mikasika ny hilàna ny hitehirizana ny kolotsaina Thai marina aho. Ary mangataka amin'ny Thailand mba hamerina ireo vehivavy miboridana mampiseho nono tamin'ny Songkran eo amin'ny vohikalan'ny Ministeran'ny kolotsaina, eo amin'ny toerana tokony hisy azy ireo. Izay fotsiny.
Sompop Budtarad no voalohany nanao hosodoko ny tantaran'i Nang Songkran.
Thai Connoisseur dia mahita fa ireo tovovavy telo dia “naneho fotsiny ihany tamin'ny endriny fomba nentin-drazana ny Songkran, izay toa zary adino”
…tovovavy telo naneho fotsiny ihany tamin'ny endriny fomba nentin-drazana ny Songkran, izay toa zary adino, tamin'ny alalan'ny dihy tsy manalavitra ny fanaon'ireo renibeny fahiny fony fanjakan'i Siam. Amin'ny teny hafa, miboridana ny tapany ambony! Iza no afaka hanatsiny azy ireo? Heveriko fa zavatra tsara ho an'ny tanora ny mamelona indray ny fomba fahiny fanaon'ny razany nefa zary adino.
Saksith nitafatafa tamin'i Kaewmala izay namariparitra ny Ministeran'ny Kolotsaina ho toy ny “Talibans ho an'ny kolotsaina Thai”
Maro amin'ny rehetra na Thais na tsy Thais no mahalala fa taonjato iray eo izay, niboridana ny vehivavy Thai nandehandeha teny rehetra teny. Raha izany, nivoaka avy aiza ary ity “lasitra” henjan'ny Kolotsaina Thai ity? Azo antoka aloha fa tsy avy amin'ireo fomba fahiny, sy mahazatra ny Thais.
Harrison George, manoratra ho an'ny Prachatai, dia maneho hevitra momba ny fihatsarambelatsihin'ireo manampahefana.
Ny nahadiso ireto vehivavy tanora ireto dia ny nanaovany izany maimaimpoana. Heloka ara-toekarena ny azy ireo, fa tsy ara-maoraly akory. Raha tany amin'ny trano fisotroana metatra vitsivitsy monja niàla teo (ary nandainga momba ny taonan-dry zareo, izay fomba fanao amin'io fandraharahana iray io ry zareo), tsy ho nanelingelina azy ireo velively ny lalàna. Ary nandraisan'izy ireo karama izany.
Isaan Style dia manondro ireo fomba fanao sy fitondrantena hafa izay mitondra voka-dratsy bebe kokoa ho an'ny sarin'i Thailand
Manimba ny sarin'i Thailand ny sary toy itony! Azafady! Ahoana ny amin'ireo trano fisotroana mampiantrano mpivarotena, manao fampisehoana fitanjahana, ireo trano fisotroana tonga hatramin'ny fanaitairana sy fanorana ary hatrany amin'ny fanomezana fahafinaretana ara-nofo, ireo trano fisotroana fanaovana karaoke misy vehivavy mpandroso mampidera nono ery amin'ny àty lalin'ny efitrano ery, ireny trano fiasana misy olona ampiasaina toy ny andevo ireny ary ny hafa raha mbola hotohizantsika eto foana.
Ahoana ny amin'ireo fihetsiketsehana mahafaty olona, ny fahafatsesana tsy mitsahatra mahazo ny tsy manantsiny any Atsimo, ny antontan'isa mampivarahontsana momba ny loza an-dalambe, ny kolikoly mahamenatra sy ny sisa. Tsy manimba ny sarin'i Thailand ve ireny?
Ny vahiny mety hisaina hoe ny Songkran dia fety ifanondrahana rano fotsiny ihany! Izaho aza mino mihitsy hoe 90% amin'izy ireny no tonga sy mihevitra toy izany ary tonga fotsiny ho amin'izany.
Izany rehetra izany dia nampivanàka ahy satria ny ministeran'ny kolotsaina sy ny manampahefana dia mihiaka zava-mahamenatra, nefa leferin-dry zareo ny lafiny efa hita tsara izao fa tena ratsy ho an'i Thailand, ny famarotana ankizy antoandro benanahary izao hivaro-tena, ary tsy izay ihany, fa ny fitaka bevava ilazàna fa hoe tsy misy mpivaro-tena eto Thailand fa ankizivavy manaiky antsitra-po handeha hiaraka, ary raha ekeny, dia ny hiray ara-nofo amin-dehilahy no misy, ary ireo lehilahy no te-hanome vola azy, tsy ratsy kosa an.
Nosamborin'ny polisy ireo ankizivavy ary naseho ny mpampahalala vaovao. Maja Cubarrubia dia miantso ny amin'ny tokony hiarovana ny zo maha-olona sy ny fiainana manokan'ireo tanora ireo
Ankilan'ny tokony nanafenan'ny polisy ny mombamomba ireo tovovavy, mba azon'ny polisy natao ve ny tsy nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety hisorohana ny fanimbazimbana ny zo maha olona sy ny fiainana manokana ary ny maha-izy azy an'ireo ankizivavy ireo – ireo zo voalaza ao anatin'ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny ankizy izay nosoniavin'i Thailand rahateo ary ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena miaro ny ankizy ?
The Lost Boy mametraka fanontaniana misimisy kokoa momba ilay tranga
Ilay tantara manontolo, mazava loatra, dia zava-mahatsikaiky saingy ny manahiran-tsaina ahy dia ny vahoaka manjary miasa loha amin'ny zavatra tsy misy dikany. Tsy misy manontany ny amin'ny antony nahatonga ireo ankizivavy telo ireo teny, voalohany indrindra, na ny loza mety hanjo azy ireo eny. Ireo mpampiasa Twitter monina any Thailand dia tsy mahatsiaro ho tohina noho ity resaka ankizivavy mpianatra telo niboridana ity izay nandihy nanolona ireo lehilahy marobe efa mamomamo. Mety ho tafiditra tanaty zava-manahirana ireo ankizivavy ireo izay niafara aminà fanolanana azy ireo mihitsy, azo antoka ny amin'izay.
Political Prisoners in Thailand manakiana ny “tsy fahampian'ny fahaiza-miaina eo amin'ny vato nasondrotry ny tany”
Vehivavy vitsivitsy no manàla ny akanjo amboniny dia mikorontana ireo vato nasondrotry ny tany. Ny famonoana ireo Miakanjo Lobaka Mena tamin'ny andro nanakaiky ny Songkran (ny 2009 sy 2010) dia toa nitondra hafaliana sy haravoana ho an'ireo vato nasondrotry ny tany. Aiza izay mahamenatra ireo vato nasondrotry ny tany ireo fony namono mpanao fihetsiketsehana ny tafika? Angamba ity tranga ity no lakolosy fanairana ny amin'ny tsy fahampian'ny fahaiza-miaina eo amin'ny vato nasondrotry ny tany manodidina ny mpanjaka.
Ireto fanehoan-kevitra vitsy avy ao amin'ny Twitter tao Bangkok:
@freakingcat Raha mbola sorena mikasika ireo ankizivavy 3 niboridana nandihy nandritra ny Songkran i Thailand, mitohy hatrany kosa ny famarotana DVD ahitana ankizy manao vetaveta ao Sukhumvit & tsy misy olona miraharaha izany
@qandrew Tsy gaga nandre fa ireo mpandihy 3 tamin'ny Songkran dia manana fifandraisana aminà trano fitsotroana sy filalaovana izay mpanao politika & polisy no tompony, ka nandrisika azy ireo ho sahy handihy miboridana.
@weirdwern “Mila mpisolo vaika ny ankàlana ny Thais. Mora kokoa noho ny mamàha ny olan'ny firenena izany.” – Prof.Chalidaporn, miresaka momba ny trangan'ireo ankizivavy telo nandihy niboridana